Nofoanan'i Aostralia ny saram-bola azo havaozina hampihenana ny faktioran-jiro | Fanavaozana maintso
Aostralianina dia manafoana ny premiums amin'ny fanavaozana mba hampihenana ny faktiora amin'ny herinaratra
Nanambara ny Governemanta Aostralianina fa misy premium ho an'ny sehatry ny angovo azo havaozina hofafana, ao anatin'ny drafitry ny angovo izay mikendry ny hampihenana ny vidiny ary hiantoka ny famatsiana "toekarena" an'ireo orinasa sy olon-tsotra.
Raha tokony ho ny fanampiana amin'izao fotoana izao dia hanangana drafitra antsoina hoe "Garantie National Energy Guarantee" izy hamporisihana ireo mpaninjara ao amin'ity sehatra ity mividy herinaratra enta-mavesatra, ankoatry ny fampiasana angovo tsy mandoto betsaka isan-taona.
Ny fepetra, izay mifototra amin'ny tolo-kevitry ny Energy Security Board, dia hanome "herinaratra mora vidy sy azo antoka kokoa, nefa mamela antsika ny adidintsika iraisam-pirenena«, Nanome toky ny minisitry ny angovo, John Frydenberg sy ny praiminisitra Malcolm Turnbull.
Raha ny filazan'ny mpanohitra azy dia famindrana «mazava be»Alohan'ny sehatry ny mpandala ny nentin-drazana mpandala ny nentin-drazana mpandala ny nentin-drazana dia hanafoana ny sarany amin'ny angovo azo havaozina hatramin'ny taona 2020, amin'ny fiheverana fa ity sehatra ity dia afaka hifaninana amin'ny tsena malalaka.
Raha ny filazan'ny governemanta: «Politika azo itokisana, tsena mpanohana iray izay miteraka tahan'ny herinaratra mora vidy kokoa. Midika izany fa tsy hisy ny fanampiana, tsy hisy haba na rafitra fifanakalozana.
Ny fanapaha-kevitra dia misy ny fanekena ireo tolo-kevitra naroson'ny talen'ny siansa manam-pahaizana ao amin'ny Governemanta Aostraliana, Alan Finkel, mba hanaovana tetezamita. milamina manoloana ny fampiasana angovo azo havaozina ka amin'ny 2030 dia hanome mihoatra ny 42 isan-jaton'ny fanjifana angovo izy ireo.
Araka ny fanambaran'ny mpandalina ny fantsom-pahitalavitra samihafa, ny drafitry ny governemanta mihevitra izy fa ny fanavaozana dia hisolo tena ny 40 isan-jato amin'ity taona ity.
Ny governemantan'ny firaisam-pirenena conservative, izay ahitàna ireo mpiaro ny indostrian'ny arintany ary ireo tsy mino ny fiovan'ny toetrandro, dia miantoka ny tokantrano hitahiry isan-taona hatramin'ny AU $ 115 (US $ 90,22 na € 76,50) eo anelanelan'ny taona 2020 sy 2030.
Toa an'i Espana, ny vidin'ny herinaratra dia nitombo mihoatra ny 60 isan-jato tao anatin'ny 10 taona lasa tany Aostralia
Ny mpitarika ny Antokon'ny Asa, Bill Shorten, dia nanome tsiny an'i Turnbull noho izy nanaiky ny fitakian'ny praiminisitra teo aloha Tony Abbott, izay mametraka ny tenany ho resy lahatra manoloana ny fiovan'ny toetrandro.
Ny mpitondra tenin'ny mpiasa momba ny angovo azo havaozina, Mark Butler dia manome toky fa ny drafitry ny governemanta “handrava angovo azo havaozina sy asa an'arivony amin'ity orinasa ity. Nanampy ihany koa izy fa ny antokony dia maniry ny angovo madio hanehoana ny 50 isan-jaton'ny fanjifana angovo amin'ny 2030.
Ho azy, ny laharana voalohany amin'ny antoko Green, Richard di Natale, dia nihevitra fa ny fanambarana dia hanakana an'i Aostralia tsy hahatratra ireo tanjona kendrena natsangana ao amin'ny Fifanarahana Paris.
Na izany aza, nanambara i Aostralia roa taona lasa izay fa ny tanjony dia ny hampihena ny famoahana entona entona amin'ny 2030 eo anelanelan'ny a 26 sy 28 isan-jato ambanin'ny taona 2005.
Mampalahelo fa androany dia mihoatra ny 85 isan-jaton'ny angovo lany any Aostralia no avy lasantsy fosily, indrindra avy amin'ny arina. Ny ankamaroan'ny mpahay siansa dia mino fa tokony hahena izany mba hanampiana hanalefaka ny vokatry ny fiovan'ny toetrandro.
Soa ihany fa ny fanatsarana be dia be ny fahombiazan'ny fanavaozana dia hanampy ireo mpampiasa vola tsy miankina hampiasa vola ao aminy, ny ohatra tsara indrindra dia ny orinasa mpamokatra hafanana masoandro any Port Augusta.
1 Ny zavamaniry mafana lehibe indrindra eto an-tany dia haorina ao Aostralia
1.1 Zavamaniry mafana
Ny zavamaniry mafana lehibe indrindra eto an-tany dia haorina ao Aostralia
Nankatoavin'ny governemanta Aostralianina ny fananganana ilay toha-pambolena mafana lehibe indrindra eto an-tany. Hanana herinaratra 150 megawatts izany ary hatsangana ao Port Augusta, any South Australia.
Holafaina ny zavamaniry 650 tapitrisa dolara aostraliana (510 tapitrisa dolara amerikana), Hiteraka asa fananganana 650 eo ho eo ho an'ny mpiasa ao an-toerana izany, raha ny fanazavan'ireo mpamolavola, ary mikendry ny handrakotra ny filan'ny herinaratra rehetra ho an'ny governemanta fanjakana. Hanomboka ny taona ho avy ny asa ary kasaina ho vita amin'ny taona 2020.
SolarReserve, monina any California, no orinasa miadidy ny fanamboarana. Ny orinasa amerikana koa dia ao ambadiky ny orinasa 110-megawatt Crescent Dunes CSP any Nevada.
Ny zavamaniry photovoltaic an'ny masoandro dia manova ny tara-pahazavana ho lasa herinaratra, noho izany dia mila batterie hitahirizana angovo be loatra izy ireo rehefa tsy miposaka ny Masoandro; zavamaniry mafana amin'ny masoandro, ho an'ny anjarany, ampiasaina fitaratra hampifantoka ny tara-masoandro amin'ny rafitra fanafanana.
Raha ny filazan'ny manam-pahaizana isan-karazany, toa ny profesora an'ny University National Australie, Matthew Stocks: "Ny iray amin'ireo fanamby goavana amin'ny angovo hafanana amin'ny maha-fitaovana fitehirizana azy dia ny fitehirizana ny hafanana fotsiny".
"Thermal dia fomba mora vidy kokoa hitehirizana angovo noho ny fampiasana bateria"manampy mpampianatra momba ny injenieran'ny angovo maharitra Wasim Saman, avy amin'ny University of South Australia.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Aostralianina dia manafoana ny premiums amin'ny fanavaozana mba hampihenana ny faktiora amin'ny herinaratra
Tsy azo esorina ny lasantsy fosily arctic
Setroka, inona izany, ny vokany ary ny fomba hiadiana aminy